मेरो कहानी पनि कृष्ण भाईको जस्तै हो मलाई पनि कृष्ण जस्तै हाँस्न रहर छ – PathivaraOnline
Home > समाचार > मेरो कहानी पनि कृष्ण भाईको जस्तै हो मलाई पनि कृष्ण जस्तै हाँस्न रहर छ
इन्द्र आचार्य/अति दुर्गम हिमाली बारीको भित्तामा टाँसिएको एकतले झुप्रे घर । आफु बस्नेसँगै जोडेर बनाइएको बाख्रोको खोर । बर्खे झाडीले हावासँगै उढिरहेका अनगिन्ती झिंगा र भुसुनाहरुले बारम्बार उनकै शरीरमा आक्रमण गरिरहेका छन् । धपाउन अब उनीसँग न त दुवै हात छन् न खुट्टा नै । बाँकी छ केवल शरिरको गिँड मात्र ! नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी हरिकाजी ढुंगाना, कार्यालयले खाटाएको कार्यक्षेत्रमा विद्युत मर्मत गर्दै गर्दा ११ हजार भोल्टको करेन्ट लागेर दुवै हात र खुट्टा गुमाएपछिको अवस्थामा ।
बयवृद्ध बाबु-आमाका साथमा हरिकाजी ढुंगाना : त्यो बेला उनकी जीवन संगिनीको पेटमा भर्खरै मात्र उनै हरिकाजीको नासो सलवलाई रहेको थियो । दुधे छोरी काखमा थिईन् । गर्भवती जीवन संगिनी सिता ढुंगानाले आँखाबाट आँसु बगाउदै शरिरको गिड मात्र बचाउन सकेपनि ठुलो प्राप्ति हो भन्दै सहमती जनाईन् । नाताले सोल्टि भएकाले त्यो निर्णय लिने मध्यको यो शब्दकार म स्वयं पनि थिए । त्यसैले उनको त्यो अवस्था देखि अहिले सम्मका सबै अवस्थाको म स्वयं प्रत्यक्षदर्शी पनि हो ।अहिले देब्रे खुट्टाका समेत केही औला छैनन् । दुई हात र दाहिने खुट्टा माथिल्लो भागमै काटेर फालिएको तीन बर्ष भयो । शरिरको गिडमात्र लिएर उनी बाँचिरहेका छन् । सारा गाउँबस्ती उज्यालो पार्न हिँडेका उनको भने जीवन अन्धकार भएको छ । जीवन जिउन खियाउने उनका दुबै हात छैनन्, खुट्टा छैन । अरुलाई उज्याले दिने उनको अभिलासाले आज आफ्नै जीवन पूर्ण रुपमा अन्धकार बनेको छ ।
त्यही जागिरले आज उनको अवस्था यस्तो भयो । परिवार र उनको भरणपोषण तथा बृत्ति विकासका लागि कसैले भरपर्दो साहारा दिन सकेका छैनन् । विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालयमा बारम्बार हारगुहार गर्दापनि उनले पाउने तलब समेत पाएनन् । “प्राधिकरणकै काममा मेरो यस्तो हालत भयो, त्यही पाउने तलव जीवनभर पाएपनि बाँच्ने आश आउथ्यो” उनले गुनासो सुनाए । ज्यालादारी कर्मचारीको रुपमा नियुक्त भएका कारण उनलाई यस्तो अवस्थामा समेत पाईरहेको तलब प्राधिकरणले दिन सकेन । यसले झनै उनको जीवन अन्धकारमय बनेको छ ।सहयोगको अपिल ! म हरिकाजी ढुंगाना, नेर्पा ८, खोटाङ्ग साविक रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ६ खोटाङ्गको हिमाली भेगमा मेरो घर छ । दुवै हात र खुट्टा गुमाएपनि म स्वस्थ पुर्न जीवन पाएको छु । त्यसैले मलाई अझै बाँच्न मन छ । म आफैले कमाएर पाल्नुपर्ने बयोबृद्ध बाबा-आमा र दुधे बालबालिका छोरा-छोरी को जीवन र भविष्यसँगै मेरो जीवनका लागि सहयोगी मन रसाउन जरुरी छ । यसैले म हात जोरेर विश्वजगतका सहयोगी मन र भावनाहरुलाई जीवन रक्षाका लागि केही आर्थिक सहयोगको हार्दिक अपिल गर्दछु ।
कसरी भयो यस्तो ?बिजुली बनाउँदाबनाउँदै नांगो तारमा करेन्ट आयो, उनी अढाइ घन्टासम्म पोलमै तुर्लुङ्ग झुण्डिरहे, हेर्दाहेर्दै पाँच सय गाउँले जम्मा भए, उनलाई पोलबाट झार्न कोही तम्सिएनन् खोटाङ जिल्लाको धितुङ, हलेसी, सल्ले गाविसका दर्जनौँ गाउँ बिजुली नभएर अन्धकारमय भएको एक साता नाघिसकेको थियो। स्थानीयले दिनको १० पटकभन्दा बढी फोन गरेर बिजुली फ्युज सेवा अर्खौलेमा जानकारी गराउँथे। धितुङ, हलेसी, सल्ले गाविसका दर्जनौँ गाउँको बिजुलीमा समस्या आए बनाउन ४ जना कर्मचारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अर्खौलेमा खटाएको थियो। ७ दिन हुँदा पनि गाउँ अन्धकारमय नै रहेपछि स्थानीयले सदरमुकामस्थित प्राधिकरणलाई नै जानकारी गराए। प्राधिकरणले धितुङ, हलेसी, सल्ले गाविसमा किन बिजुली गएको भनेर जानकारी माग्दै चाँडै बनाउन बिजुली फ्युज सेवा अर्खौलेलाई निर्देशन दियो।
करेन्ट लागेको मानिसलाई बचाउन गए आफैँलाई करेन्ट लाग्ने भन्दै गाउँलेहरु डराएर आफूलाई बचाउन नआएको उनले सुनाए। उनले भने, ‘बिजुली छैन, मेरो बेल्ट खोल्दिनुस्, बेल्टका कारण मलाई निकै अप्ठेरो भइरहेको छ, करेन्ट लाग्दैन भन्दा पनि कोही तम्सिएनन्।’ साढे ४ बजे पोलमा अड्केका उनलाई ७ बजे नेपाल आर्मीका जवानहरुले उद्धार गरे। साढे २ घन्टा पोलमा झुन्डिएको सम्झदै उनले त्यो आफूलाई साढे २ वर्षजस्तो लागेको सुनाए।तालिम सकाएर घर फर्कँदै गरेका नेपाली सेनाको ५ जनाको समूहले आफूलाई उद्धार गरेको उनले सुनाए। हलेसीबाट दिक्तेल आउँदै गरेको बसमा उनीहरु आएका थिए। आफू रुखमा झुन्डिरहेको देखेपछि उनीहरुले स्थानीयसँग डोरी मागेर पोलमुनि बस राखी उनलाई बसको छतमा झारेका थिए। पोलबाट बसको छतमा खसेका उनी बेहोस भए। स्थानीयले घरमा लगेर राखे। ९ बजेतिर सदरमुकामबाट प्राधिकरणले पठाएको गाडी पुग्यो। आफूसँग भएको गाडी जिल्लाबाहिर गएपछि प्राधिकरणले भाडामा गाडी पठाएको रैछ।
गत चैत १६ गते पोलमा करेन्ट लागेर सैनिक जवानहरुले उद्धार गर्नेबित्तिकै बेहोस भएको ३१ दिनपछि हरिको होस आयो। उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए। आफ्नो सद्दे हात र खुट्टा गुमाउनु पर्दाको पीडा उनले अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन्। आँखाभरि आँसु पार्दै उनले भने, करेन्टबाट बँचे भनेर ठूलो गर्व गरेँ, अहिले आफ्नो जीवन आफैँलाई भारी भइरहेछ। बरु त्यही बेला मर्न पाएको हुन्थ्यो भनेर उनी आफ्नो जीवनदेखि नै पछुतो मान्छन्। उनको उपचारमा ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। बिएन्डबीलाई अझै उपचार गरे वापत ७ लाख भन्दा बढी तिर्नुपर्नेछ।विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी महानिर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले उनलाई उपचारका लागि १६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अहिलेसम्म १२ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ। गाउँमा उनको ७ रोपनी पाखो बारी र डेढ रोपनी खेत छ। उपचारका लागि ८ लाखभन्दा बढी ऋण लिइसकेको उनकी पत्नी सीताले बताइन्। आफन्तहरुसँग मागेर काम चलाएको उनले सुनाइन्। हरिको उपचार गर्न अझै १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने डाक्टरहरुले बताएका छन्। सीताले भनिन्, ‘यत्रो रकम कहाँबाट जोहो गर्ने, नजिकका आफन्तबाट मागिसक्यौँ। अब दिने कोही बाँकी छैनन्।’